Lahatsoratra mahasoa ho an'ny fanariana faty - Casting Minghe
Formula fanaovana kajy Ny fikajiana fikajiana amin'ny fisafidianana ny milina fanariana maty: Hery fametahana milina famonoana maty (t) = 1.4 * faritry ny vinavina * ny tahan'ny faritra vinavinan'ny maty ...
29 Jolay 2021
Ny fizotry ny fanapahana kofehy dia miankina amin'ny firafitry ny faritra vita amin'ny milina sy ny fitaovana milina CNC ampiasaina. Amin'ny ankapobeny, ny fampiasana ny sisiny fanapahana havanana hanodinana ireo kofehy ankavanana sy ny fampiasana ny sisin'ny havia havia mba hanodinana ireo kofehy havia dia manana tombony amin'ny fanohanana marin-pototra. O ...
Ny fitaovana boribory boribory dia be mpampiasa amin'ny milina mandeha ho azy sy ny indostrian'ny fitaovana, ary karazana fitaovana tsy boribory. Raha tena ilaina dia tsy azo amboarina araka ny tokony ho izy ilay mpanamboatra elliptika amin'ilay mpamorona fitaovam-piadiana CNC, saingy tena tsy fahita firy ilay mpamorona fitaovana CNC. Amin'ny tranga kely, ny elliptical g ...
Ny fonosana teleskopika varingarina dia singa miaro izay apetraka amin'ny varingarin'ny solika, varingarina, varingarina hydraulic, sns., Ary avy eo manitatra sy manao fifanarahana aminy. Izy io dia manana ny mampiavaka ny tantera-drano, tsy misy vovoka, mahazaka harafesina, fanoherana ny hafanana avo sns, ary be mpampiasa ...
Ny halavan'ny famokarana dia lava. Mora reraka ny mpandraharaha. Raha vantany vao misy ny tsy fahombiazana, matetika dia maharitra segondra vitsy monja amin'ny fahitan'ny olombelona ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'izany, izay mety hiteraka fako amin'ny vokatra, ka miteraka fatiantoka ara-toekarena lehibe. ...
Ny Wu Steel Works dia misy atrikasa roa, atrikasa fanaovana vy iray ary atrikasa fanaovana vy faharoa. Ny atrikasa fanodinana vy faharoa dia mamokatra vy tsotra, ary ny atrikasa fanaovana vy voalohany dia mamokatra andiany vy kely toy ny vy manokana. Ny fizotry ny famokarana dia ahitana hot me ...
Ny tany tsy fahita firy dia afaka manatsara ny hamafin'ny vy vy
Araka ny fantatsika rehetra, ny fampidirana singa an-tany tsy fahita firy amin'ny fitaovana vy dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny firafitra sy ny fahombiazan'ny fitaovana. Matetika ireo singa tsy fahita eto an-tany amin'ny vy dia ampiana amin'ny 0.05% ~ 0.20%. Satria ny tahan'ny radiia atomika an'ny tany tsy fahita amin'ny vy lavitra e ...
Fanavaozana ara-teknolojia hanatsarana ny maha-homogène-n'ny Composition Smelting Composition
Amin'ny dingan'ny fanaovana vy, aorian'ny nahavitan'ny fandrendrehana mpanova, ny vy anidina dia araraka ao anaty ladle amin'ny alàlan'ny paompy mpanova; ...
Ahoana no mahatsapa ny famonoana sy ny fampangatsiahana amin'ny rano fa tsy ny menaka
Ny menaka famonoana no mpanelanelana fampihenana be mpampiasa indrindra mandritra ny fotoana maharitra mandritra ny fotoana maharitra. Na dia manana toetra mampiavaka ny fampangatsiahana hafakely aza ny menaka famonoana dia manana olana ihany koa izy toy ny fanjifana angovo, ny fandotoana ny tontolo iainana ary ny loza ateraky ny afo. ...
Tamin'ny 1958, HF Shroyer dia namorona ny teknolojia fanaovana casting vy amin'ny modely plastika azo aparitaka ary nahazo patanty. Ny maodely nampiasaina tamin'ny voalohany dia vita tamin'ny takelaka polystyrene (EPS) ary novolavolaina tamin'ny fasika misy fisaka. ...
Hiresaka teknolojia hosoka
Ny forging dia anarana iraisan'ny forging sy stamping. Izy io dia fomba famolavolana sy fanodinana izay mampiasa ny marotoa, anvil, totohondry ny milina forging na ny die mba hametrahana tsindry amin'ny banga mba hamoahana deformation plastika, mba hahazoana ny endrika takiana sy haben'ny workpiece. . ...
feno maty manipy Sina rindrambaiko famolavolana sy injeniera mahay mamela ny santionany hatao ao anatin'ny 15-25 andro
Fitaovana fanaraha-maso feno & fanaraha-maso kalitao no tena tsara Die Casting Parts
Ny fahaizany midadasika amin'ny famolavolana prototypes na amin'ny faran'ny famokarana goavana Serivisy fanariana maty
Teknika mandroso farany amin'ny casting (Milina 180-3000T,Machining Cnc, CMM) manodina karazana metaly sy plastika isan-karazany